बुधबार, साउन २०, २०७८ ०२:१५:३६ युनिकोड
काठमाडौं । नर्भिकका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले उद्धार गरेकी मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको अवस्थामा सुधार भइरहेको छ ।
उद्धार गरेर ल्याएको भोलिपल्टदेखि नै उचित उपचार, आहारविहार र केयरिङ पाएका कारण कलाकार निशाको मुहारमा चमक देखिएको थियो । अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी रहेको जस्तो देखिने उनको शरीरका घाउहरु निको हुन थालेका छन् भने अन्य स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार भइरहेको छ ।
डा. पंकज जलान नेतृत्वको टिमले उनको उपचार गरिरहेको छ । अस्पतालमा आउँदा जिउँदो लाशजस्तो रहेकी उनी चलमलाउन थालेकी छिन् । बुझेजस्तो गरी शरीर तथा अनुहार र आँखाको हाउभाउबाट प्रतिक्रिया समेत दिन थालेकी छिन् । उनले पछिल्लो समय बोल्ने समेत कोशिश गरिरहेकी छिन् । उपचारका संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार भोक लाग्दा संकेत दिनेसम्मको भएकी छिन् । ‘उहाँ भोक लाग्यो भने कराएजस्तो गर्नुहुन्छ ।’ उपचार संलग्न चिकित्सहरु भन्छन्–‘क्रमशः अवस्थामा सुधार भइरहेको छ ।’
डा. जलानले निशाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन् । उनले नर्भिकले सकेसम्म सबै विकल्पमा गएर उनको उपचार गरिरहेको समेत बताए । जलानका अनुसार दुर्घटनाका कारण घिमिरेको ब्रेन इञ्जुरी भएको र त्यसको अवस्था निकै जटिल रहेकोले पूर्ण रुपमा नर्मल हुने संभावना भने न्यून छ । ‘उहाँको ब्रेनमा निकै ड्यामेज भएको छ ।’ डा. जलानले भने–‘तर, आएको बेलाको तुलनामा घाउहरु निको हुन थालेका छन् । हामीले डाइट र थेरापीमा फोकस गरेका छौं । प्रोटिन, क्यालोरिजहरु प्रशस्त दिइरहेका छौं । हिजोबाट ह्वीलचेयरमा समेत बसाउन सुरु गरेका छौं ।’
यो अवधिमा निशाको अवस्थाको बारेमा समाचारहरु समेत प्रकाशन भएका थिए । तर, उनलाई उद्धार गर्न, उचित उपचार व्यवस्था मिलाउन कसैले पनि सहयोग गरेनन् । नर्भिकले उनको उद्धार गरेपछि उनलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरुको समेत लहर नै चलेको छ । उनको नाममा अक्षयकोष स्थापना गरी सहयोग रकम धमाधम जम्मा भइरहेको उनको उद्धारका लागि समन्वय गरेका समाजसेवी दुर्गानाथ दाहालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १०, २०७८, ०६:३३:३२
प्रख्यात बलिउड अभिनेता नसिरूद्दीन अस्पताल भर्ना
बुद्धवीर लामा दशौं गीतिमय साँझ अमेरिकामा सम्पन्न
अभिनेत्री बसुन्धरा भुसालद्धारा चलचित्रकर्मी कल्याकारी कोषलाई रकम हस्तानतरण
बिहीबार, चैत ५, २०७७ जनता नेपाल
कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन- २’ को ग्राण्ड प्रिमियर सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको छाया सेन्टरमा सिजन- २ को पहिलो भाग देखाइएको हो । प्रिमियरमा उत्कृष्ट २४ मा परेका प्रतियोगीहरुको परिचय गराईएको थियो। निर्णायक मनोज गजुरेल र हाँस्यकलाकार सुवोध गौतमको कमेडी प्रस्तुतिबाट सुरु गरिएको पहिलो भागमा टप २४ मा परेका ४ प्रतियोगीको प्रस्तुति देख्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
रहेनन् पुराना श्रस्टा गायक ध्रुव केसी
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ जनता नेपाल
गायक धुव्र केसीको बिहीबार निधन भएको छ। भैँसेपाटीस्थित अर्किड केयर सेन्टरमा उपचार गराउँदै आएका केसीको अपराह्न ४:४५ बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। गायकका भान्जा प्रविण निरौलाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षदेखि पार्किन्सन्सको समस्या थियो। पछिल्ल्लो एक महिनादेखि उनलाई ‘सिजर’हुने समस्या थियो। पुरा पढ्नुहोस्